hay pellet umshini uyathengiswa,ukwenza hay pellets for feed kanye nophethiloli
Bangu, ngokusho kweWikipedia, usikiwe futhi womile utshani, alfalfa, ama-legumes noma ezinye izitshalo ze-herbaceous emabeleni amakhulu ayindilinga. Ngokuvamile kusetshenziswa njengokudla kwesilwane, ikakhulukazi izinkomo zokudla, amahhashi, izimbuzi, imvu, njll.
Empeleni, hay zingenziwa pellets ngomshini pellet feed. Kungenza i-hay ibe ama-pellets wesimo esiyingqayizivele ngengxube yezinye izithako ukwenza izilwane zibe nokudla ngokulinganayo.
Kungani sisebenzisa umshini we-hay pellet mill ukwenza ama-pellets kaphethiloli?
I-hay uhlobo lokudla okuvamile okubonakalayo empilweni yethu yansuku zonke, futhi akubona bonke abantu abane-hay futhi abalima izinkomo. Ngenxa yalokho, azidingi ukwenza ama-pellets okuphakela. Noma kunjalo, imindeni eminingi idinga uphethiloli wokushisa amakhaya abo ebusika noma ukupheka. Esimweni esinjalo, ama-hay pellets adlala indima ebalulekile ekwehliseni izindleko zikaphethiloli!
Umshini we-hay pellet uwenza kanjani ama-hay pellets wokudla?
Okokuqala nje, qiniseka ukuthi uthola izinto eziningi. Ngemuva kwalokho i-grinder yokudla iyadingeka ukuze impahla eluhlaza ilungiselelwe kahle i-pelletizing (ubude bufushane kuno-10mm). Ngemuva kwalokho lezi zinhlayiya ezincane kufanele zichotshozwe zibe yimpuphu ngokusebenzisa isigaxa sesando (ububanzi obungaphansi kuka-3mm). Ekugcineni, Kuyadingeka umshini owomile ukugcina umswakama we-hay ezungeze 15%. Futhi emva kokuba konke lokhu kwenziwe, okuqukethwe kutholakala ngokuphelele kumenzi we-hay pellet. Yondla i-hay ungene ku umenzi wepellet, futhi amandla azocindezelwa kube ama-pellets density. Lokhu akusona ukuphela! Ama-pellets aphuma kumenzi we-pellet ashushu kakhulu (mayelana 85 degrees). Kufanele usebenzise umshini opholile ukupholisa ama-pellets kuwo 35 degrees. Ngemuva kokuphola, ama-pellets adinga ukugcwala ngomshini wokupakisha bese angakwazi ukuwagcina isikhathi eside.
Kukhona izimbotshana zephethiloli
Ama-pellets asetshenziswa njengamafutha anezinzuzo ezithile:
I-hay pellet uhlobo lomthombo wokushisa oluhlaza selokhu kukhiqizwa 90% amagesi abamba ukushisa okungaphansi kunamafutha ezinalahle njengamalahle, futhi 10 izikhathi ngaphansi komkhawulo wokuphuma kwe-EPA.
Ama-pellets we-hay anesilinganiso samandla aphezulu wokufaka kokukhipha okuphakeme kakhulu njengoba 20:1, ngenkathi izinkuni zinayo 10:1, kanti i-biodiesel ine 5:1.
Iphawundi elilodwa lama-pellets e-hay lizokhiqiza cishe 8,000 Ama-BTU, ecishe ilingane nokhuni oluqinile, futhi siseduze nokushisa okukhishwa ngamalahle ngamalangabi. Ngakho-ke uhlobo oluhle lomthombo wokushisa.
Yini enye, hay ishibhile ukuthola futhi miningi kakhulu kunamafutha ezinsalela.
Okwamanje, ukwenziwa kwama-hay pellets kube ibhizinisi elithembisayo, hhayi kuphela ngenxa yezindleko eziphansi zokuthola izinto ezingavuthiwe, kodwa futhi ngoba ukushisa i-hay pellets yokushisa kwasendlini kungonga ngokumangazayo ingxenye yezindleko.
ukwenza hay pellets for feed
Ama-pellets ama-hay eyenziwe ngomshini wokugaya we-hay pellet aqukethe izithako eziningi ezidingekayo leso silwane kufaka onogwaja nehhashi abakudingayo. Ukwakheka kwe-Pellet kubuye kugweme ukungalingani kokudla kwezilwane ezi-fussy. Ngaphezu kwalokho, ama-pellets kulula ukuwagcina, ukuze izilwane zidle ama-pellets anempilo okunempilo unyaka wonke.